Kismaayo News » Hogaanka ciidamada Qaranka oo dhalinyarada lagu wareejinayo
Hogaanka ciidamada Qaranka oo dhalinyarada lagu wareejinayo
Kn: Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada Qalabka sida amar ku siiyay in dhalinta dalka dibaddiisa tababarka ku soo qaatay ee dalka dib ugu soo noqday loo dhiibo hogaanka ciidanka.
Madaxda ciidanka ayaa sheegay inay sida ugu degdegsiinyaha badan u fulin doonaan dalabka madaxweynaha. Taliyaha ciidanka ayaa sheegay in unug ilaa iyo horin loo dhiibi doono hogaan kooda dhalinyarada haysata tababarka dhinaca hogaaminta ee dalka dib ugu soo laabtay.
Arinta dhinaca hogaanka ayaa qayb ka ahayd waxyaabaha ragaadiyay in horumar la taaban karo laga gaaro dhisidda ciidan qaran oo xoog leh, waxaana jira kumanaan ku labisan darajooyin sare balse aan lahayn wax khibrad ah oo la isaga xiray ama dawladdii hore la soo shaqeeyay oo hadeer hawlgab ah. Hadii arintani dawladdu kaga dhabayso oo ciidamada ku shubto dhiig cusub isla mar ahaantaana hogaan kooda lagu wareejiyo dhalinta wax baratay heer unug ilaa iyo heer urur ama guuto, markaasi waxaa muuqata in natiijo wax ku ool ah laga gaari karo dhisidda ciidamo tayo leh.